OnePlus 7 ma lahaan doono shahaadada IP-ga laakiin OnePlus wuxuu ku faanaa muuqaal | Androidsis
OnePlus 7 ma lahaan doono shahaadada IP-ga laakiin OnePlus wuxuu ku faanaa muuqaal ahaan
Saldhigyada OnePlus ayaa na siiya waxqabadka cajiibka ah iyo qiimaha lacagta, inkasta oo sanadihii la soo dhaafay, qiimaheeda uu si tartiib tartiib ah u kordhayay tan iyo sidii aan maalmo ka hor ku tusnay Qiimaha bilowga ah ee OnePlus 7 Pro wuxuu ku bilaaban karaa 749 euro Yurub.
Si kastaba ha noqotee, dhammaan moodooyinka shirkadda Aasiya ee OnePlus ay soo saartay sannadihii la soo dhaafay waxay leeyihiin cillado qaarkood oo aan ka dhigaynin inay noqdaan terminal ku habboon dhammaan isticmaalayaasha. Bixinta wireless-ka iyo shahaadada IP-ga ayaa ah laba tusaale oo cad waxaa ka mid ah. Marka laga hadlayo kan dambe, shirkaddu sidoo kale waxay ku faantaa fiidiyowgeeda ugu dambeeyay.
Sanadihii la soo dhaafay, doodda ah in aan lagu darin shahaadada IP, sida ay sheegtay shirkaddu, waa taas kordhin lahaa qiimaha terminalka qiyaastii $ 30. OnePlus ayaa soo duubay fiidiyow cusub, fiidiyoow kaas oo OnePlus 7 Pro lagu ridayo baaldi biyo ah, isagoo sheegaya in xarunteeda inkasta oo aysan bixin shahaadada IP-ga ay u adkeysato inay ku dhacdo baaldi biyo ah ...
Si loo dhammeeyo qosolka dadka isticmaala, qeybta hoose ee fiidiyowga, shirkaddu waxay na xusuusineysaa taas damaanadaadu ma daboolayso waxyeelada biyaha. Farqiga kaliya ee udhaxeeya aalad leh shahaado IP iyo mid aan aheyn, waa in terminal-ka lagu tijaabiyay duruufo gaar ah. Tijaabada noocan ahi waxay dammaanad ka qaadaysaa inaan awoodi doonno inaan u adeegsanno terminaalka roobka, tusaale ahaan, innaga oo aan ka baqaynin inaan waxyeello u geyno.
OnePlus kor u kac
Sida ku xusan fiidiyowgan, waxay umuuqataa in OnePlus uusan sifiican u fahmin waxa uu ka hadlayo. Waxay isku dayayaan "inay sameeyaan waxa saxda ah iyagoo ku saleynaya waxa run ahaantii loo baahan yahay, ee aan ahayn warshadaha," ayay sheeganayaan. Sida muuqata shahaadooyinka IP-ga ayaa ku jira inta badan boosteejooyinka maxaa yeelay warshaduhu waxay rabaan, maahan maxaa yeelay waa baahi ama rabitaan adeegsadayaasha.
Doodani waa inaanay naga yaabin, tan iyo cudurdaar la'aanta aan lagu darin lacag la'aanta wireless-ka ayaa ah inay tahay nidaam xukun gaabis ah. Aan aragno OnePlus, habeenkii, qofna ma doonayo in xaruntooda ay ku soo rogto muddo 30 daqiiqo ah. Waqti badan ayaan haysannaa habeenkii oo dhan si aan u soo dallacno, in kastoo si tartiib ah loo dhigo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » OnePlus 7 ma lahaan doono shahaadada IP-ga laakiin OnePlus wuxuu ku faanaa muuqaal ahaan
Realme X iyo Realme X Daabacaadda Dhallinyarada waxaa la sii dayn doonaa 15-ka Maajo
Huawei waxaa loo caleemo saaray inuu hoggaamiye ka noqdo suuqa kiniiniga Android